SOMALITALK - SAYNISKA
W.Q.: C/fataax M. Cabdulle
Saynisyahanno u dhashay dalka Bilgium ayaa waxay ka shaqaynayaan wax ay u malaynayaan in uu noqon doono dharkii mustaqbalka.
Dharkan waxaa loogu magac daray "i-Wear" oo u taagan "Intelligent Wear" (Dhar Fahmo leh); wuxuuna qofka xiran u qabanayaa shaqooyin aad u fara badan sida hawlaha taleefoonnada gacanta (mobile phones), kumbiyuutarrada, iyo dabagalka iyo dhagaysashada qalabka cisbitaallada (hospital monitoring equipment).
Hawlwadeennada hawshan wada oo fadhigoodu yahay magaalada Brussels waxay ku takhasuseen samaynta waxyaaba fahmada leh (sida aaladaha yaryar ee farsamada kumbiyuutarrada la xiriira); waxayna ka tirsan yihiin mac-hadka magaciisa la yiraahdo Starlab.
Haddaba, sida ay sheegtay shirkadda samaynaysa dharka "i-Wear", dharkani wuxuu ka kooban yahay dhowr lakab (ama qaybood) oo is-dul-saaran (kala sareeya). Qaybta ugu saraysa waxay la soconaysaa sida uu yahay caafimaadka qofka xiran. Waxay ilaalinaysaa garaaca wadnaha, iyo qofka dhiiggiisu xaaladda uu ku sugan yahay (kacsanaan ama degganaan - blood pressure), iyo waliba heer-kulka jirku sida uu yahay (body temperature).
"Lakabka jirka xiga ayaa ah qaybta hubinaysa habsami-u-socodka jirkaaga, sida wadne garaaca, heerka dhiigga (kacsanaan ama degganaan), iyo heer-kulka jirka" sidaas waxaa tiri Katrien van Gerven.
Shaarka ku xusuusinaya furaha iyo boorsada (Wallet-ka)
Qaybaha kale ee lakabyada "i-Wear" waxay kuu sheegayaan deegaanka kugu xeeran sida uu yahay (qabow, kulayl, dhex-dhexaad iwm.); waxay qiyaasi karaan iftiinka maalinta, sidaas darteedna way ogyihiin marka ay habeen tahay. Sidoo kale waxay cabbirayaan shanqarta (dhawaaqyada), sidaas darteedna waxay xaqiijinayaan in aad ku sugan tahay goob guux iyo sawaxan leh.
"Dhammaan xogta 'i-Wear' ku jirta waxay uruurineysaa isla markaasna shaan-dhayn iyo war-celin la samaynaysaa qalabka kumbiyuutarrada sida, tusaale ahaan, taleefoonka gacanta. Sidaas darteed haddii aad ku sugan tahay meel sawaxan iyo qaylo badan taleefoonkaagu si sarre ayuu u dhacayaa (ring), haddii aad shir ku jirtana taleefoonku maba dhacayo, waayoo wuxuuba ogyahay in aad mashquul tahay!" sidaasna waxaa tiri Katrien van Gerven oo hadalkeedii sii wadata.
Shirkaddani weli ma sheegin xilliga ay suuqa keeni doonaan dharka "i-Wear", laakiin waxay hore ugu guulaysatay samaynta shaar ku xusuusinaya haddii aad furahaaga ama boorsada jeedbkaaga ee "wallet-ka" loo yaqaan aad ilowdo. Walxaha loo yaqaanno microchip-ka oo shaarkaas lagu sameeyay ayaa la shaqaynaya qalab ku xiran furaha iyo boorsada. Sidaas darteedna haddii aad meel kaga dhaqaaqdo, shaarka ayaa ku dhahaya "is-jir, waxaad ilowday furahaagii, ama boorsadaadii".
Katrien van Gerven: Lakabyadu hawlo ay jirka u qabtaan
Sida shirkaddu sheegtay, waxay mustaqbalka fog samayn doonaan dhar leh awood uu ku qiyaaso niyadda qofka xiran, sida in uu faraxsan yahay, caraysan yahay, ama murugaysan yahay; dharkaas oo waliba kaydin doona xaaladaha meelihii aad fasaxa u tagtay, tusaale ahaan  jawigu sida uu ahaa, dhawaaqyadii xayawaanka ee goobihii aad tagtay iyo udgoonkii (urtii) dhirta aad soo aragtay, iwm. si aad mar kale u xusuusato ama dad kale ula qaybsato.
Laakiin, waxaa xusid mudan in dharkan noocan (ama moodadan) u samaysan aan weli loo samayn mashiin (prototype) mar keliya soo saari kara tiro aad u fara badan oo la suuq geeyo. shaarka ku xusuusinaya furaha iyo boorsada, inkastoo qaab fiican loo sameeyay, haddana wuxuu wataa anteenno yar oo ka taagan garabkaaga.
Gebagebadii, waxay ila tahay in dharka mustaqbalka ee "i-Wear" uusan u baahnaan doonin in faashon ahaan loogu xayeesiiyo bandhigyada loo yaqaanno "catwalks" ee waddamada reer galbeedka aad looga yaqaanno! Waxaa sidoo kale la yaab leh, aqoonta cilmigu meesha ay bani'aadamka la gaartay. Haddaad u kuurgasho farsamada dheeraysa ee sayniska ku salaysan, ee casrigan la gaaray, waa suurtagal in riyadani ay rumowdo; sababtoo ah, dhowr sannadood ka hor, cidi kuma fakaraynin sida kumbiyuutarradu maanta u shaqeeyaan in loo adeegsan doonaa.
Abwaan Soomaaliyeed oo aan filayo in uu ahaa Cabdi Muxumed Amiin, haddii aanan qaldanayn, baa laga hayaa:
Haadduu Dayaxii la tegay
Maan Dadaalo oon ku daydo!].
W.Q.: Cabdulfataax M. Cabdulle